ရှုထောင့် - အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲစွဲလမ်းမှု၊ မာကု Potenza (၂၀၁၅) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
သဘာဝ 522, S62 (25 ဇွန် 2015) Doi: 10.1038 / 522S62a
အွန်လိုင်းထုတ်ဝေ - 24 ဇွန် 2015
မာ့ခ်ပိုဇန်ကမာ့ခ်စ်ကပြောကြားသည်မှာ ထပ်မံ၍ ခိုင်မာတောင့်တင်းသောရန်ပုံငွေသည်မဖြစ်မနေလိုက်နာရမည့်အလေ့အကျင့်များကိုနားလည်ရန်နှင့်အောင်မြင်စွာကုသရန်ဖြစ်သည်။
ယေးလ် Univ ။
မည်သည့်အပြုအမူများကိုစွဲလမ်းမှုဟုသတ်မှတ်နိုင်သနည်း။ လောင်းကစားခြင်း၊ ဂိမ်းကစားခြင်း၊ အင်တာနက်အသုံးပြုခြင်း၊ လိင်၊ ဈေးဝယ်ခြင်းနှင့်စားခြင်းတို့သည်အလွန်အကျွံဖြစ်လာနိုင်သည်။
၏လတ်တလော, ပဉ္စမထုတ်ဝေမှာတော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါများ၏ diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ် (DSM-5) - စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို သတ်မှတ်၍ ခွဲခြားဖော်ပြသည့် ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်စိတ်ရောဂါကုသမှုအသင်းမှထုတ်ဝေသောစာအုပ် - လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာပြitsနာကိုအခြားနေရာများတွင်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းမရှိသော Impulse-control disorders မှ 'ပစ္စည်းနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့်စွဲလမ်းစေသောရောဂါများ' သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များ မှစ၍ မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်ပတ်သက်သောရောဂါများဖြစ်ပြီးမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အပြုအမူမျိုးစုံကိုယခုအခါစွဲလမ်းမှုဟုသတ်မှတ်နိုင်သည်ဟူသောအမြင်များမှသိသိသာသာပြောင်းလဲမှုကိုကိုယ်စားပြုသည်။1.
လောင်းကစားရောဂါသည်လက်ရှိ၌စွဲလမ်းမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည့်တစ်ခုတည်းသောပစ္စည်းမဟုတ်သောအခြေအနေဖြစ်သည် DSM-5အလုပ်အဖွဲ့ကအင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါ (IGD) သည်နောက်ထပ်သုတေသနပြုရန်အဆိုပြုသော်လည်း၊ IGD ၏ရှုထောင့်ပေါင်းစုံသည်အငြင်းပွားဖွယ်ရာကျန်ရှိနေသည်။ အင်တာနက်သည်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိရောဂါတစ်ခု၏အာရုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိဖြစ်နိုင်သည်၊ နှင့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော 'အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါ' ကိုလက်ခံရန်လိုအပ်လျှင်မည်သည့်အတိုင်းအတာသည်စွဲလမ်းမှုကိုကိုယ်စားပြုသနည်း။ ထိုအဖွဲ့သည်ဂိမ်းကိုအဓိကထားခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းသည်ထိုအချိန်ကအင်တာနက်အသုံးပြုမှုတွင်အကောင်းဆုံးလေ့လာမှုနှင့်ပြargနာဖြစ်နိုင်သည်2သို့သော်လူမှုရေးကွန်ရက်နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းစသည့်အပြုအမူများကိုလည်းစစ်ဆေးနေသည်။ အင်တာနက်ကိုထိုသို့သောအသုံးပြုမှုသည်ဆေးခန်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ပြproblemနာရှိသည့်လူမှုရေးကွန်ရက်သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းညံ့ဖျင်းခြင်းနှင့်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအကြားအရက်သောက်ခြင်းပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်နေသည်3။ ဒီဂျစ်တယ်နည်းပညာဖြင့်လူအများအပြားကြီးထွားလာသည်နှင့်အမျှအင်တာနက်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများကိုစွဲလမ်းစေနိုင်သောအရာအဖြစ်စဉ်းစားခြင်းသည်ဆေးစွဲသူများအတွက်အရေးကြီးသည်။
သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါလက္ခဏာများကိုလက်ခံသင့်သည်ဆိုလျှင်ပုံမှန်မဟုတ်သောပုံမှန်အပြုအမူများအကြားမည်သည့်နေရာတွင်မည်သည့်နေရာကိုခွဲခြားမည်ဆိုသည်ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီးအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအတွက်ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသောခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုများပြားလာသည်။2။ လက်ရှိတွင် DSM-5 လောင်းကစားခြင်းဆိုင်ရာရောဂါရှာဖွေခြင်းအတွက်ပိုမိုတင်းကြပ်သောသတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်ထားသည် (၎င်းသည် ၉ ခုအနက်ပါ ၀ င်မှုစံချိန်စံညွှန်း ၄ ခုနှင့်အထက်နှင့်ကိုက်ညီရမည်) သို့မဟုတ်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားခြင်းရောဂါ (၁၀ အနက်မှ ၅ ခုထက်ပိုသော) သည်ပစ္စည်းဥစ္စာအသုံးပြုမှုဆိုင်ရာရောဂါများကိုဖော်ထုတ်ရန်ထက် (၂ ခုသို့မဟုတ်ထို့ထက် ပို၍ ပါ ၀ င်သောစံနှုန်းများကိုအသုံးပြုသည်) ကိုအသုံးပြုသည်။ ၁၁)၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းမဟုတ်သောအပြုအမူများမည်မျှကျယ်ပြန့်စွာနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအပေါ်သူတို့၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျှော့မတွက်ရန်ဂရုပြုရမည်။
နောက်ထပ်အငြင်းပွားဖွယ်ရာအကြောင်းအရာမှာလိင်စွဲလမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ hypersexual disorder အတွက်တရားဝင်စံနှုန်းများကိုစမ်းသပ်ပြီးစမ်းသပ်ခဲ့သည်4ဒါပေမယ့်အခြေအနေကမပါဝင်ပါဘူး DSM-5။ အခြားအပြုအမူစွဲလမ်းမှုများကဲ့သို့ပင်ပုံမှန်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအဆင့်များအကြားအဘယ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုသတ်မှတ်မည်ကိုဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများရှိနေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, တပ်မက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်လောင်းကစားစွဲအကြား craving နှင့်ဆုချီးမြှင့် circuitry နဲ့ပတ်သက်တဲ့သိမြင်မှုနှင့်ဇီဝပြောင်းလဲမှုများအတွက်တူညီနှင့်ထိုကဲ့သို့သောတပ်မက်အဖြစ်စွဲကဲ့သို့သော features တွေအကဲဖြတ်အကြေးခွံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏ရှုထောင့်မှသက်ဆိုင်ရာပုံရသည်။ လောင်းကစားနှင့်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုများနှင့်ဆက်စပ်သည့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်သည်မည်သည့်အတိုင်းအတာအထိ hypersexuality နှင့်ဆက်စပ်နေသနည်းဟူသော aetiological နှင့်ဆက်စပ်သောအချက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောနားလည်မှုသည်ခွဲခြားခြင်းအားထုတ်မှုများကိုကူညီခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်ထားကုသမှုများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုမြှင့်တင်သင့်သည်။
အလွန်အကျွံအစာစားခြင်းနှင့်စျေးဝယ်ခြင်းအပါအဝင်အခြားအပြုအမူများကိုလည်းတစ်ခါတစ်ရံစွဲလမ်းစေသည်။ သတိပြုရမည့်အချက်မှာပါကင်ဆန်ရောဂါအတွက် dopamine တိုးမြှင့်ကုသမှုကိုခံယူထားသောလူနာများသည်တစ်ခါတစ်ရံအလွန်အကျွံစားခြင်း၊ ဈေးဝယ်ခြင်း၊ လိင်နှင့်လောင်းကစားခြင်းအလေ့အထများကိုတီထွင်ခဲ့ကြပြီးထိုအပြုအမူများအားလုံးကိုမောင်းနှင်စေသောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည်။ သို့သော်ကွဲပြားခြားနားမှုများရှိသည်။ အဝလွန်ခြင်းသည်ဇီဝဗေဒဆိုင်ရာလက္ခဏာများကိုပစ္စည်းစွဲလမ်းမှုနှင့်အတူမျှဝေကြောင်းတွေ့ရှိရသော်လည်းအခြေအနေကသူ့ဟာသူပေါ်လွင်ထင်ရှားသည့်နည်းလမ်းများအရအဝလွန်မှုရှိသူတစ်စုသာအစာကိုစွဲလမ်းစေသည်ဟုဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူများအနေဖြင့်အစာစားခြင်းမမှန်သည့်ရောဂါရှိသူများသည်လောင်းကစားခြင်းနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာရောဂါများနှင့်တူညီမှုရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ခြင်းဖြင့်အစားအသောက်စွဲလမ်းမှုစံနှုန်းများကိုပြည့်မီနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အကယ်၍ အစားအစာများသည်စွဲလမ်းနိုင်သည့်အလားအလာရှိကြောင်းပြသပါကတိကျသောအစားအစာများ (သို့) အစားအစာအစိတ်အပိုင်းများကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပေါ်လစီများနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်အရေးကြီးသည်။
ပစ္စည်းဥစ္စာမဟုတ်သောရောဂါများကိုစွဲလမ်းစေနိုင်သည်ဟုကျွမ်းကျင်သူများကငြင်းခုံနေစဉ်၊ လူများသည်ပြproblemနာအပြုအမူများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်နေကြသည်။ ထို့ကြောင့်အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အတွက် epidemiological, Clinical, neurobiological, genetic and culture အသွင်အပြင်များကိုပိုမိုနားလည်ရန်ပိုမိုသုတေသနပြုရန်လိုအပ်သည်။ သုတေသနပြုစုရာတွင်အဓိကကျသည် DSM-5နှင့်အလားတူဖြစ်စဉ်ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ ၁၁ ကြိမ်မြောက် (၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ဝေရန်) ရေးသားသင့်သည် ရောဂါ၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခွဲခြားရေး။ သို့သော်ယင်းသို့ဖြစ်ရန်ရန်ပုံငွေအေဂျင်စီများသည်ပစ္စည်းမဟုတ်သောစွဲလမ်းမှုအတွက်သုတေသနကို ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်ရမည်။ ယူနိုက်တက်စတိတ်တွင်အမျိုးသားကျန်းမာရေးအင်စတီကျုတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်ကိုအဓိကထားသည့်ဌာနများပါဝင်သည်။ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာစွဲလမ်းမှုဆိုင်ရာအမျိုးသားအင်စတီကျုးရှင်းတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်ဤနယ်ပယ်တွင်သုတေသနကိုတိုးတက်စေရန်အထောက်အကူပြုလိမ့်မည်။ ပြင်သစ်တွင်အစိုးရအနေဖြင့်အမူအကျင့်စွဲသူများအားစောင့်ရှောက်ရန်ဆေးစွဲကုသမှုစင်တာများလိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဤအပြုအမူများကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားပုံသည်လက်တွေ့ကျသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။ အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်သောထိခိုက်မှုများကိုခံစားနေရသောလူများအားမည်သို့အကောင်းဆုံးကာကွယ်ရမည်ကိုနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။
Potenza, MN စွဲ 101, 142-151 (2006) ။
Petry, မိုင် & O'Brien, က CP စွဲ 108, 1186-1187 (2013) ။
Hormes, JM, Kearns, B. & Timko, CA စွဲလမ်းမှု 109, 2079–2088 (2014) ။
Reid, RC et al။ ဂျေလိင် Med ။ 9, 2868-2877 (2012) ။
နယူးဟေးဗန်းရှိယေးလ်တက္ကသိုလ်မှလောင်းကစားသုတေသနတွင်ထူးချွန်သောစင်တာ၏ဒါရိုက်တာ Marc Potenza သည်
အဆိုပါညစ်ညမ်းတဏှာမေးခွန်းလွှာ: psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ
ပါကင်ဆန်ရောဂါရှိ Impulse Control Disorders